“Izay mandena dia mba holemana kosa » Ohab. 11:25
Toy ny ranon’aina ho antsika mangetaheta i Kristy, ka azontsika sotroina maimaimpoana.Rehefa manao izany isika, dia manana an’i Kristyho loharano fantsakana miboiboika hatramin’ny fiainana mandrakizay. Dia ho fenon’izany rano izany ny tenintsika. Voaomana isika anondraka ny hafa.
Vantany vao tonga eo amin’i Kristy ny olona anankiray, dia mitsiry ao am-po ny faniriana te hampahalalana ny hafa fa manana sakaiza sarobidy izy, dia i Jesosy Kristy- tsy azony hidina ao am-po ilay fahamarinana mahavonjy sady manamasina. Raha mitafy ny ankanjom-pahamarinan’i Kristy isika, ka feno fifaliana amin’ilay Fanahiny mitoetra ao anaty, dia tsy hahatana samirery ny fiadanana azontsika. Hanan-javatra hambara isika rehefa hitantsika sy nandramantsika fa tsara i Jehovah.
Hiverina ho fitahiana ho antsika ny ezaka ataontsika te hanasoa ny hafa. Io no fikasan’Andriamanitra tamin’ny nanomezany antsika anjara asa amin’ny drafi-panavotana (...)
Raha mandeha miasa araka izay nanirahan’i Kristy ny mpianany ianao, ka mahataona fanahy ho Azy, dia ho tsapanao fa mila fanandramana lalindalina kokoa sy fahalalana bebe kokoa ny amin’ny zavatra momban’Andriamanitra ianao, ka ho noana sy mangetaheta fahamarinana. Hitalao amin’Andriamanitra ianao; hihamatanjaka ny finoanao , ary ny fanahinao hisotro amin’ny lalindalina ao amin’ny loharanom-pamonjena. Ny fisedrana zava-tsarotra sy fitsapana no hitarika anao handinika ny baiboly sy hivavaka. Hitombo amin’ny fahasoavana sy fahalalana an’i Kristy ianao, ka ampiroborobo fanandramana manana amby ampy.
Ny toe-tsaina tsy tia tena fa mikely aina ho an’ny hafa no mamolavola toetra lalina , tsy miovaova, ary maha-te ho tia tahaka an’i Kristy, ka mitondra fiadanana sy hasambarana ho an’izay manana azy. Asandratra ambony ny faniriana. Tsy misy ny toerana ho an’ny hakamoana sy ny fitiavan-tena. Koa izay mampiasa ireo teotra soa maha kristianina no hitombo sy ho tonga matanjaka hiasa ho an’Andriamanitra. Hanana fisainana ara-panahy mazava izy, sy finoana mitombo sady tsy miovaova, ary hery miavosa hanandratra vavaka . Ny fanahin’Andriamanitra izay manetsika ny fanahiny , no miantso ny firindrana masina ao amin’ny fanahy , ho valin’ny fikasihan’Andriamanitra. Ireo izay mahafoy tena manao ezaka tsy misy fitiavan-tena hanasoavana ny hafa, dia toa efa mampahazo antoka hatrany famonjena azy. Ny hany fomba hitomboanaamin’ny fahasoavana (...) dia ny firotsahana an-tsehatra , ny fanolorana ny fahaiza-manaontsika, amin’ny fanampiana sy fanasoavana ireo mila ny fanampiana azontsika homena azy.